नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई बोलाउँनु सामान्य मात्र होइन ! - Himalayan Kangaroo
नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई बोलाउँनु सामान्य मात्र होइन !
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ असार २०७२, मंगलवार १५:५३ |
नेपाल नयाँ संविधान निर्माणको संघारमा छ । सके असारमा नसके साउन सिध्याउने गरी प्रमुख दलहरु संविधान निर्माणको कर्ममा जुटेका छन् । संविधानका लागि दलहरुलाई लागेको असारे चटारोबीच एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने नयाँ दिल्ली तर्फको दौडमा अग्रसर हुनु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष वोलावटमा हुन लागेको दाहालको यो भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा कस्तो तरंग ल्याउने हो , नेपाली राजनीतिमा अहिले यो प्रश्न अहम बनेर चर्चामा छ ।
राजनीतिका जानकारहरुका अनुसार भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी विजेपी र नेपालको एकीकृत माओवादीबीच गतिलो सम्वन्ध हुनुपर्ने कुनै आधार छैन । सन् २०१४ मे महिनामा नरेन्द्र मोदी भारतीय सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएपछि उनको नेपाल नीति हिन्दु विचारवाट ओतप्रोत हुने र एकीकृत माओवादी लगायतका उग्रवादी कम्युनिष्ट घटकहरुप्रति कडा हुन सक्ने विश्लेषण धेरैले गरेका थिए । मोदीको छिमेकी पहिला भन्ने नीति अनुसार उनले परम्परागत भारतीय विदेश नीतिलाई तोड्दै दक्षिण एसियाका मुलुकहरुसंग प्रत्यक्ष राजनीतिकरुपमा सम्वन्ध विस्तार गर्न लागि परे । मोदीको उक्त कदमले भारतप्रति ठूलो संख्याका नेपालीमा रहेको नकरात्मक सोचाईमा धेरै सकरात्मक परिवर्तन आएको वताउनेहरु पनि अहिले कम छैनन् । नेपालमा संविधानसभाका प्रमुख चार दलहरुले १६ बुँदे सहमति जुटाएर संविधान निर्माणमा फास्ट–ट्रयाकको अवलम्वनगरि अगाडि बढेपछि धेरैले यो प्रक्रिया भारतीय सहयोग विना अगाडि नवढेको आशंका गरे । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव कुनै नयाँ कुरा होईन । त्यसैले पनि प्रमुख चार दलहरुले गरेको अप्रत्यासित सहमतिप्रति धेरैले दक्षिणको गुप्त र शान्त समर्थन भनि टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्ष दाहाललाई प्राथमिकताकासाथ निमन्त्रणा गर्नुलाई सामान्य अवस्था मात्रै मान्न सकिदैन । तर एकीकृत माओवादी नेता शक्ति बस्नेत भने यो भ्रमण पूर्व निर्धारित र शंका गरिहाल्नु पर्ने शैलीको नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।
मोदी नेतृत्वको भारतले आफ्नो बैदेशिक नीतिमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । त्यतिमात्र नभई यस अघिको कांग्रेस आई नेतृत्वले गरेका व्यापक त्रुटिहरुलाई सच्चाई सघन राजनीतिक तथा नरम कुटनीति मानिने सांस्कृतिक सम्वन्धलाई बढावा दिनेमा मोदी नेतृत्व लागि परेको छ । अध्यक्ष दाहालको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्वन्धलाई थप मजवुत पार्न सहयोग पुग्ने नेता बस्नेतको दावी छ ।
दरबार ढलेपछि भारतले नेपाल नीतिको रुपमा अवलम्बन गर्दै आएको दुई खम्बे अवधारणा पनि ढलेको छ । एकलाई कमजोर बनाएर अर्कोलाई उचाल्ने उस्को नेपाल नीतिमा नयाँपन खोज्न भारत भरमग्दुर तयारीमा छ । यही नीतिको परिमार्जनको खोजीमा रहेको भारत र अझ मोदीले अध्यक्ष दाहाललाई कस्तो कान भर्ने हुन सर्वत्र चासो र चर्चा अहिले यही छ ।
Previousअर्थमन्त्रालयमा बजेटको देउसी भैलो शुरु
Nextनयाँ संविधानको मस्यौदा पारित
को हुन् डाक्टर गोविन्द केसी ?
१७ चैत्र २०७१, मंगलवार ०५:३९
२७ पुष २०७४, बिहीबार ०१:००